Siyaasaa - - Page 23
Abdii Boruutiin Tokkummaan Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) hoo yoomi? Jalqaba bara kanaa (2010) irratti yeroo oduu gaddisiisaa fi hamilee cabsaa dhageenyu, barri haarayaan kun Oromoo …
Bar-kurneen dhufu uummata Oromootiif maal fida laata?
Abdii Boruutiin Erga gabrummaa Habashaa jalatti kufee kaasee uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa hadhaawaa otuu hin godhin oolee buluu baatus; qabsoo kana keessatti jijjiiramni tokko tokko argamanis, …
Remark on ADF statement Recently another organization with Oromo name has appeared. It will be remembered that last year an organization claiming similar vision with …
Gidduu kana jaarmaan maqaa Oromoo maxanfate tokkommoo gadi baheera. Bara darbe 2012 jalqaba irratt akkasuma dhaabi bira maqaa Adda bilisummaa Oromoo utuu gad hin dhiisin …